Fampidirana milina lathe: karazana 16 an'ny milina Lathe - TSINFA
Lathe dia iray amin'ireo fitaovana milina be mpampiasa indrindra eo amin'ny sehatry ny fanodinana vy. Misy karazana fitaovana milina isan-karazany. Sarotra ho an'ny olona tsy mahalala an'ity indostria ity ny manazava tsara ny fahasamihafana misy amin'ny karazana fitaovan'ny milina. Amin'ity taratasy ity dia sokajinay ho an'ny zana-rafitra 6: ny fomba fanaraha-maso, ny firafitry ny milina, ny fampiasana, ny fitaovana fanodinana, ny isan'ny mpihazona fitaovana, ny karazana faritra masinina. Na dia samy hafa karazana anarana lathe aza dia misy tranga miampita, toy ny latte machine lathe machine koa misy lathe mitsivalana, misy ihany koa ny fantsom-pohyMasinina lathe CNC, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny fahazoantsika ny lathe.
Karazana fampidirana milina lathe:
Araka ny fomba fifehezana
Araka ny firafitry ny milina
Latina fandriana miraviravy
Araka ny tanjon'ny masinina
Latina Crankshaft, lats camshaft, lathe wheel, lathe axle, lathe roll ary ingot lathe, fitaovana milina mitodika sy fikosoham-bary, fantsom-pifandraisana
Araka ny fitaovana voahodina
Lathe fanapahana metaly
Voasokajy amin'ny isan'ireo mpitazona fitaovana
Fitaovana tokana mitazona latina CNC, latheta fitaovana roa misy latabatra CNC
Voasokajy amin'ny karazana masinina
Latina cnch chuck karazana, lathe CNC ambony
Amin'izao fotoana izao dia misy fomba fanaraha-maso roa ho an'ny lathe, ny iray dia ny fifehezana amin'ny tanana, ary ny iray hafa dia ny fifehezana ny programa CNC. Araka ny fomba fanaraha-maso samihafa, ny lathe dia mizara ho an'ny lathe mahazatra sy ny lathe CNC.
Ny lathe ankapobeny dia manana zavatra fanodinana malalaka, ny haben'ny fanitsiana ny hafainganan'ny fihodinan'ny spindle ary ny habetsahan'ny feed dia be. Ny efitrefitra anatiny sy ivelany, tarehy farany, ary kofehy anatiny sy ivelany an'ny workpiece dia azo zahana. Ity karazana lathe ity dia ampiasain'ny mpiasa amin'ny tanana. Mora ny miasa. Amin'ny dingana voalohany dia ahitsy ny hafainganam-pandeha, afindra ny fitaovana, aondraka ny levera fanombohana, ary atosika handroso ny fifaliana. Mandroso ny fitaovana mihodina, misintona ny any aoriana, miverina miankavia ny fitaovana mihodina, ary mankany ankavia ilay fitaovana mihodina. Ankavia sy havanana dia mitovy. Na dia tsotra aza ny fiasan'ny fiara ankapobeny, ny fikirakirana ireo singa dia hetsika ara-teknika ary ny mpiasa dia hijery ireo fitaovana fandrefesana sy ny sary hanaovana fanodinana. Rehefa milina fantsona kely amin'ny ampahany, ny lathes mahazatra dia manana tombony lehibe kokoa noho ny CNCmilina lathe. Imbetsaka ny lathes tanjona ankapobeny no namboarina, ary ny lathes CNC dia mbola eo amin'ny sehatry ny fandaharana. Noho io endri-javatra io, ny lathe mahazatra dia mbola manana tsena, mety amin'ny atrik'asa tokana, famokarana batch ary fikolokoloana.
Ireo lathes ireo dia azo zaraina ho karazana lathes mahazatra amin'ny famaritana samihafa, toy ny LT6232 sy LT6250, miankina amin'ny haavon'ny afovoany sy ny elanelan'ny afovoany. Ankoatry ny famadihana ireo karazana sanganasa rotary dia afaka mamadika kofehy isan-karazany koa izy ireo, toy ny kofehy metrika, kofehy santimetatra, kofehy modulus, kofehy diametrika ary kofehy farany.
Mba hanatsarana ny savaivony fanodinana ny lathe mahazatra, dia nalaina ny lathe bed bed (nantsoina koa hoe latel).
Ny tendrony havia an'ny latina fandriana banga eo anoloana ny vata loha dia milentika ary mahazaka faritra savaivony lehibe. Ny endrik'ilay latina dia misy lohany roa, ambany eo afovoany ary toa lasely, ka izany no iantsoana azy hoe latina. Ny latelin'ny lasely dia mety amin'ny ampahany amin'ny milina misy refy radial lehibe ary refy axial kely. Izy io dia mety amin'ny famadihana ny faribolana ivelany, ny lavaka anatiny, ny tarehy farany, ny slot ary ny metrika, ny santimetatra, ny modulus, ny kofehy, ary ny fandavahana sy mankaleo. , famerenana amin'ny laoniny ary dingana hafa, indrindra mety ho an'ny orinasa famokarana tokana. Ny latelin'ny lasely dia afaka manodina ireo sangan'asa savaivony lehibe kokoa ao amin'ilay lasely. Ny torolàlana momba ny fitaovan'ny milina dia mihamafy sy voadio tsara ho an'ny asa mora sy azo antoka. Ny lathe dia manana ny toetran'ny hery avo, hafainganam-pandeha, henjana mafy, avo lenta ary feo ambany.
Ny lathe CNC dia mivoatra avy amin'ny lathe, ary misy rafitra fanaraha-maso programa ampiana amin'ny milina lehibe. Ny programa dia fehezin'ny programa mba hifehezana ny masinina hanatanterahana ny asa araka ny fomba voafaritra, mamita ny tsingerin'ny fizotran'ny famahanana.
Toy ny lathes mahazatra, ny lathes CNC koa dia ampiasaina amin'ny milina ny faritra mihodina amin'ny faritra. Amin'ny ankapobeny, izy io dia afaka mamita avy hatrany ny masinina amin'ny varingarina ivelany, ny volo misy ny conical, ny spherical ambonin'ny ary ny kofehy, ary afaka ihany koa ny manodina ireo faritra somary mihodina, toy ny hyperboloids. Ny sangan'asan'ny lathe sy ny lathe mahazatra dia apetraka amin'ny fomba mitovy. Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana, ny lathes hydraulic dia chuck hydraulic, pneumatic ary elektrika.
Ny bikan'ny lathe CNC dia mitovy amin'ny an'ny lathe mahazatra, izany hoe, misy fandriana, lohan-doha, mpitazona fitaovana, rafitra fanerena ny rafitra famahanana, rafitra fanamafisana sy fanosorana. Ny rafitra famahanana ny lathe CNC dia tsy mitovy amin'ny latina mahazatra. Ny lathe mahazatra dia misy boaty famahanana sy mpitatitra fifanakalozana. Ny lathe CNC dia mampiasa ny maotera servo mivantana handroahana ilay slide sy ilay mpitazona fitaovana amin'ny alàlan'ny visy baolina mba hahatsapana ny fihetsiky ny fahana. Ny rafitry ny rafitra famahanana dia notsorina be.
Ny lathes CNC ankehitriny dia efa malaza amin'ny fifehezana microcomputer. Misy sokajy roa ao amin'ny lathes CNC ankehitriny, ny iray amin'ireo dia milina fampiasa amin'ny mikrokomputer tsotra, ary ny iray kosa fitaovana milina fehezin'ny solosaina. Mandritra ny fiasa, ny lathe CNC dia manao kajy arakaraka ny torolàlana momba ny programa fampidirana ary mampiditra ny valin'ny kajy amin'ny singa drive. Ny fitaovana fanaraha-maso dia manatanteraka fikajiana araka ny baiko, mampiditra ny valiny fanisana amin'ny fitaovana mpamily, mifehy ny fitaovan'ny mpamily (motera stepper) eo afovoan'ny fitaovana mpamily hitondra ny mekanisma fandefasana mekanika ary mampandeha ny dingana fiasan'ny masinina. fitaovana (sarety lava-lava sy marindrano) mba hahatsapany ny fihetsehan'ny fanapahana.
Ny tena mampiavaka ny lathe mitsivalana dia ny axis lehibe dia mifanitsy amin'ny workbench ary toa mandry amin'ny tany izy io. Ny latina mitsivalana dia mety amin'ny fanodinana ireo sanganasa maivana kokoa izay tsy lehibe ny savaivony fa lava. Izany dia satria ny lathe marindrano dia zahan'ny chuck sy ny ambony manohitra ny workpiece. Ity firafitra ity dia mamaritra fa ny lanjan'ilay sangan'asa dia tsy tokony ho lehibe lehibe. Ny entana mavesatra indrindra dia 300 kg, ary ny lathe mavesatra dia mavesatra 1 taonina. Ny halavan'ny fanodinana no tombony lehibe amin'ny lathe mitsivalana mifandraika amin'ny latina mitsangana.
Ny halavan'ny fanodinana dia 750mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm na 8000mm aza, sns.
Ny tena mampiavaka ny latte mitsangana dia ny spindle dia mifandraika amin'ny latabatra ary ny workpiece dia miraikitra amin'ny latabatra. Ny latina mitsangana dia mety amin'ny fanodinana ireo sangan'asa mavesatra miaraka amin'ny savaivony lehibe sy ny halavany fohy. Izany dia satria eo amin'ny latte mitsangana, ny clamping sy ny fampifanarahana ny ampahany dia mety, ary ny torolàlana rotary eo anelanelan'ny latabatra sy ny fotony dia manana fahaiza-mitondra tsara kokoa. Avo ny fisosan'ny fivezivezena mandritra ny asa, ka avo ny kalitaon'ny fikarakarana ny ampahany, saingy sarotra ny manome antoka ny kalitaon'ireto faritra ireto rehefa apetraka amin'ny lathes mahazatra sy lathes farany.
Ny latina mitsangana dia azo zaraina ho latina mitsivalana tsanganana tokana sy latina mitsivalana tsanganana roa. Ny lathes mitsivalana tokana amin'ny ankapobeny dia manana mpitaingina mijidina sy mpitazona sisiny. Samy manana boaty fahana misimisy ireo mpihazona roa izay azo ampiasaina tsirairay na miaraka amin'ny tsipika mitsangana sy mitsivalana. Ny lathes lehibe mitsangana amin'ny ankapobeny dia manana fehiloha roa. Ho fanamorana ny fanodinana, ny latina mitsivalana roa-tsanganana amin'ny ankapobeny dia manana mpitaingina mijidina roa sy mpitazona ilany iray. Ny takelaka roa lehibe dia misy mpitazona antsy eo amin'ny tsanganana roa.
Ny firafitry ny lalamby mirona dia mamela ny lathe ho henjana kokoa ary mora esorina ny puce.
Latina Crankshaft, lathes kodiarana, lathes roll ary lathes ingot, fitaovana milina fanodinana sy fikosoham-bary, lathes thread pipe.
Ny latina Crankshaft dia karazana lathe manokana ampiasaina amin'ny milina ny tendan'ny tsorakazo mampifandray sy ny sisin-tànana misy ny motera fandoroana anatiny sy ny crankshaft mpamatrarana rivotra.
Ny latina kodiarana CNC
Ny latina kodiarana CNC dia fitaovana milina manokana ho an'ny milina sy fanamboarana ny masinina kodiarana amin'ny milina lalamby. Mba hanatsarana ny tahan'ny fampisehoana sy ny vidin'ny fitaovana milina, novolavolaina ny rafitra CNC ho an'ny mpitazona indroa amin'ny kodiarana kodiarana, ary noresahina ny fandrefesana mandeha ho azy, ny fametrahana ny fitaovana ary ny fanapahana toekarena ao amin'ny rafitra CNC. Izy io dia maodely fandidiana milina mandeha ho azy tanteraka, ary miaraka amina rafitra fandrefesana mandeha ho azy, izay manisa ho azy ny masontsivana fanapahana tsara indrindra aorian'ny fandrefesana ny velaran'ny kodiarana hamboarina.
Ny lathes Roll dia lathes natao hanodinana ny horonana. Ireo horonan-taratasy dia matetika horonana ampiasaina amin'ny fikosoham-bary. Izy io dia endrika lehibe indrindra, mavesatra ary mavesatra vita amin'ny lava-batana misy alitara eo amboniny.
Milina mihodina sy manodina
Mihodina arymilina fikosoham-bary manerantanymilina fitambarana fitaovana dia iray amin'ireo fizotry ny milina malaza indrindra eo amin'ny tontolon'ny milina. Teknolojia mandroso mandroso io. Ny milina fitambarana dia ny fampiharana ny fizotran'ny milina maro samihafa amin'ny milina tokana. Fikosoham-baryFandavahana, milina mihodina. Ny fanodinana kompositite no be mpampiasa indrindra ary ny tena sarotra dia ny fampifangaroana ny fihodinana sy ny fikosoham-bary. Ny ivon-toeran'ny milina mitodika sy mihodina dia mitovy amin'ny fitambaran'ny latina CNC sy ny ivon'ny milina.
Sodina kofehy kofehy
Ny fantsom-pohy kofehy, fantatra koa amin'ny fantson'ny kofehy fantsona, dia latina marindrano natao hanodinana fantsom-pantsaka lehibe. Izy io dia misy savaivony lehibe amin'ny lavaka lehibe (amin'ny ankapobeny 135mm na mihoatra) ary ny chuck eo anoloana sy aorian'ilay boaty spindle. Mba hanamorana ny fametahana sy fanodinana fantsona fantsom-by na bara lehibe, ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fanodinana mekanika ny famokarana masinina, solika, simika, arina, fikarohana ara-jeolojika, famatsian-drano an-tanàn-dehibe ary indostrian'ny fanarian-drano.
Ny fiara fanapahana vy dia mitovy amin'ny fiara miasa amin'ny hazo satria ampiasaina hanapahana ny sangan'asa amin'ny alàlan'ny fanodinana ilay sangan'asa mifandraika amin'ilay fitaovana.
Na izany aza, ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa dia lehibe ihany koa:
Hafa ny firafitry ny mpihazona antsy. Malalaka kokoa ny fiara mpanao hazo. Ohatra, ny fampiasana lathe fanapahana vy handroahana vazy, ny fanetsehana ilay fitaovana hamolavola azy dia mety hanelingelina.
Tsy mitovy ny toetran'ny workpiece. Ny zotram-piasan'ny fiara vy dia matetika homogeneous, ary ny hakitroka sy ny hamafin'izy ireo dia mitoetra ho iray ihany, ka azo tapahina 3mm indray mandeha, ary azo esorina ho azy ilay fitaovana. Raha ampiasaina toy izao ny kitay, dia ho tezitra ny hazo ary na ny hazo aza ho triatra. Ny fiara fanapahana vy mafy hazo dia tsara kokoa.
Hafa ny fitaovana fanodinana. Ny sisin'ny fanapahana fitaovana fanodinana dia tsy mitovy amin'ny zoro.
Chuck karazana lathes CNC
Ireo lathes ireo dia tsy misy rambony ary mety amin'ny famadihana kapila (ao anatin'izany ny hazo fohy). Ny ankamaroan'ny fomba fametahana dia fanaraha-maso elektrika na hydraulic, ary ny firafitry ny chuck dia manana valanoranom-panavotana maro na valanoranom-bolo tsy manapoka (izany hoe valanoranony malefaka).
Lathes CNC ambony
Ireo lathes ireo dia miaraka amina tailstock mahazatra na tailstock CNC. Izy ireo dia mety amin'ny famadihana ny faritra lava sy ny faritra kapila misy savaivony kely.
Ho fanampin'izay, mety ho hafa arakaraka ny maha-marina azy io
Ny lathe dia mizara ho lathe ankapobeny, lathe marina ary latabatra avo lenta. Ny latsa-pitenenana sy avo lenta dia matetika mifototra amin'ny lathes mahazatra. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny mari-pahaizana geometrika an'ny milina, ny fampihenana ny vokatry ny hovitrovitra sy ny loharanon'ny hafanana, ary ny fampiasana haingam-pandeha avo lenta, ny masinina dia manana fahamendrehana milina avo lenta.
Raha misy fanontaniana, aza misalasala mifandray aminay.